Apache OpenMeetings 6.2 Inosvika Iine Dhizaini Enhancements uye Zvimwe | Linux Addicts
Apache OpenMeetings 6.2 Inosvika neKuvandudza Dhizaini uye Zvimwe
Darkcrizt | 25/10/2021 21:54 | Free Software
Apache Software Foundation yakazivisa iyo Apache OpenMeetings 6.2 web conferencing server yakaburitswa umo shanduko dzakasiyana dzakaitwa dzine chekuita nekuvandudzwa kweiyo interface ye mobile version yechishandiso, pamwe nekuvandudzwa kweiyo-add-on integration API nezvimwe.
Kune avo vasina kujairana neOpenMeetings, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndeye web conferencing software inotsigira ese mawebhusaiti nemutauri senge misangano ine huwandu hwevatori vechikamu vari kutaurirana. Iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muJava uye inoparadzirwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi.
Zvimwe zvinhu zvinosanganisira: zvishandiso zvekubatanidza neakarenda scheduler, tumira wega kana nhepfenyuro zviziviso nememo, govera mafaera uye zvinyorwa, chengetedza bhuku rekero revatori vechikamu, chengeta zvinyorwa zvechiitiko, ronga mabasa pamwe chete, fambisa mhedzisiro yekushandisa manyorerwo (screencast kuratidzira), kuitisa kuvhota uye kuvhota.
Seva inogona kushandira inopokana nhamba yemisangano inoitirwa mune akapatsanurwa emakamuri emusangano chaiwo uye kusanganisira yavo seti yevatori vechikamu. Iyo sevha inotsigira inoshanduka mvumo yekushandisa maturusi uye ine simba musangano moderation system. Iwo manejimendi uye kudyidzana kwevatori vechikamu kunoitwa kuburikidza newebhu interface.
1 Main nyowani maficha eApache OpenMeetings 6.2
2 Ungawana sei Apache OpenMeetings 6.2?
Main nyowani maficha eApache OpenMeetings 6.2
Iyi vhezheni itsva inosimbisa iyo yakagadziridzwa interface yemafoni emafoni, nekuti mukati mekuvandudzwa kweiyo mushandisi interface yakaitwa, inomira pachena, semuenzaniso, iyo shanduko dzakaitwa dzakatenderedza nzvimbo yekutarisa uye kugona kuchengetedza OpenMeetings pachiratidziro chemba chenharembozha kuitira kuti ikwanise kuvhurwa zvakafanana neyemuno nharembozha.
Kunze kwaizvozvo, mune nharembozha yeOpenMeetings shandisa chete HTML5 / webRTC uye inoda iOS / Safari v15.x kuti ugone kugovera webcam nemakrofoni nemazvo. Ndichiri paAndroid / Chrome inoshanda zvakanaka kubva kune dzakapfuura shanduro (v81), zvisinei iyo yakanakisa tsika ndeyekuchengetedza bhurawuza kusvika parizvino (sezvino, vhezheni yazvino iv95 yeChrome / Android).
Imwe shanduko inomira kunze kweApache OpenMeetings 6.2 ndeye el Yakaitwa tsigiro yeOpenAPI 3 - Rest API kubatanidza kushanda kwemusangano mumasaiti.
Kuburikidza neiyo yekubatanidza API, inobvumira kubatanidza OpenMeetings makamuri emusangano mune chero webhusaiti kana API yakavakirwa paNode kana PHP. Mamwe mapulagi enharaunda anoshandisa iyi API yeMoodle, SugarCRM, Drupal, Joomla inogona kuwanikwa muSettings> Plugins chikamu. mune iyi link.
Finalmente yekuchinja kwakamira mune iyi vhezheni itsva:
OpenAPI Spec mune swagger v fomati
Mienzaniso yakavandudzwa yekubatanidza yeNode uye PHP
Zvimwe zvigadziriso nekuvandudzwa, 28 nyaya dzakagadziriswa.
Kugadziriswa kwe mobile version uye landscape mode
Kuvandudza kugona kwekutanga kubva pachiratidziro chemba pane nharembozha
Mhinduro kudambudziko neFirefox 87, 90 kana 91 isingaratidze ese makamera, uye kudzvanya bhatani rekubuda kunoratidza peji ine mavara matsvuku.
Mhinduro kune dambudziko iro kukoka hakugone kutumirwa kubva kumakamuri kana karenda
Mhinduro kudambudziko randisingakwanise kugovera kamera / vhidhiyo pane iOS / nhare (odhiyo inoshanda chete zvakanaka)
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kuburitswa kweshanduro iyi nyowani, unogona kutarisa iwo madhiri mukati meyekuzivisa zviri pamutemo Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Ungawana sei Apache OpenMeetings 6.2?
Kune avo vanofarira kukwanisa kuwana iyi vhezheni itsva, unogona kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye muchikamu chayo chekurodha pasi unogona kuwana mabhinari mapakeji, pamwe nekodhi yekuumbwa kwavo kana zvakare mufananidzo weDocker watogadzirirwa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Ndichiri mune yeavo vanoshandisa Arch Linux uye zvigadzirwa, ivo vanozokwanisa kuwana iyo package takagadzirira muAUR.
Zvakare, iwe unogona kuteedzera rairo dzakatsanangurwa mune iyi link, kwaunongofanira kurodha pasi yazvino yakagadzika pasuru yekushandisa, tambanudza uye unomhanya iyo bhinari kutanga iyo webhu yekuisa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Apache OpenMeetings 6.2 Inosvika neKuvandudza Dhizaini uye Zvimwe
Kodi 19.3 inosvika kare pane zvaitarisirwa kugadzirisa zvipembenene zviripo mushanduro yapfuura